कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेठ १३ गते सोमबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेठ १३ गते सोमबारको राशिफल !
प्रकाशित : आइतबार, जेठ १२, २०७६१७:२७ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ जेठ १३। सोमबार। इ.स. २०१९ मे २७। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। ने.सं. ११३९ बछलागा। ज्येष्ठ कृष्णपक्ष। अष्टमी, १०:०३ उप्रान्त नवमी। नक्षत्र– शतभिषा, १५:२६ बजेउप्रान्त पूर्वभाद्रपदा। योग– वैधृति, १२:३७ बजेउप्रान्त विष्कम्भ। करण– कौलव, १०:०३ बजेदेखि तैतिल, २३:०३ बजेउप्रान्त गर। आनन्दादिमा अमृत योग। चन्द्रराशि– कुम्भ। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:१२ बजे, सूर्यास्त– १८:५१ बजे र दिनमान ३४ घडी ०८ पला। पञ्चक।
सामाजिक प्रसङ्गमा संगी-सम्बन्धी र मित्रको साथ आनन्दपूर्वक समय बित्नेछ । मित्रको लागी धन खर्च हुनुका साथै उनीहरुबाट लाभ पनि हुनेछ । प्रकृतिको सानिध्यमा समय बिताउन सक्नु हुनेछ । सरकारी र अर्ध सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ । दांपत्यजीवनमा सम्वादिता रहनेछ । अचानक धन लाभको सम्भावना छ ।
नयाँ कार्यको आयोजनको इच्छा राख्नेहरुको लागी अनुकुल दिन छ । नोकरी तथा व्यवसायमा लाभदायक परिणाम मिल्नेछ । पदोन्नति हुनेछ । व्यापारमा नयाँ दिशा खुलेको प्रतित हुनेछ । सरकार द्वारा लाभको समाचार मिल्नेछ । मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । रोकिएका कार्य पूर्ण हुनेछन् । गृहस्थजीवनमा मधुरता रहनेछ ।
प्रतिकूल संयोग बन्दा कार्यमा विलम्ब हुनेछ । शारिरमा स्फूर्ति र मनमा उत्साहको अभाव रहनेछ । पेटको रोगले सताउनेछ । नोकरीमा शिर्ष अधिकारीहरुको नकारात्मक व्यवहार भोग्नु पर्नेछ । राजकीय कठिनाई बाधक बन्नेछन् । महत्त्वपूर्ण कार्य या निर्णय आज स्थगित गर्नु नै उचित हुनेछ । सन्तानको साथ मतभेद हुनेछ । प्रतिस्पर्धी र विरोधी संग सचेत रहनु आवश्यक छ ।
मनको नकारात्मक व्यवहारले निराश बनाउनेछ । बाहिरको खानपिनको कारण स्वास्थ्यमा खराबी आउनेछ । क्रोधमा नियन्त्रण गर्नु होला । पारिवारिक सदस्यको साथ अनावश्यक बखेडा हुनेछ । नयाँ सम्बन्ध पीडादायक साबित हुनेछ । पैशाको अभावको अनुभव हुनेछ । दुर्घटनाको योग छ । ईश्वरभक्तिबाट राहत महशुस गर्नु हुनेछ ।
पति-पत्नी बीच सानो कारणले मनमुटाव हुनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता रहनेछ । सांसारिक विषयको बारेमा उदास रहनु हुनेछ । सार्वजनिक जीवनमा अपयश या स्वाभिमान भंग हुने योग छ । भागीदारको साथ मतभेद हुनेछ । विपरीत लिंगीय व्यक्तिको साथको भेटघाट विशेष रहने छैन ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । घरमा सुख शान्तीको माहोल रहँदा प्रशन्नताको अनुभव हुनेछ । आर्थिक लाभ र काममा सफलता मिल्नेछ । बिरामीलाई राहत महशुस हुनेछ । नोकरीमा लाभ मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धी माथी विजय प्राप्त हुनेछ ।
आज तपाइँ कल्पना और सृजनशक्तिको उत्तम उपयोग गर्न सक्नु हुनेछ । सन्तानको प्रगती हुनेछ । प्रिय व्यक्तिको साथको भेटघाट रोमाञ्चक रहनेछ । तँ मन देखी ताजापन र स्फूर्तिको अनुभव हुनेछ । अत्याधिक विचारले मन विचल्लित हुनेछ । आज कसैको साथ वादविवाद या वौद्धिक चर्चामा भाग लिने अवसर मिल्नेछ ।
आजको दिन तपाइँ शारीरिक र मानसिक रुपले भयको अनुभव गर्नु हुनेछ । कुनै न कुनै कुराको चिन्ताले तपाइँलाई सताउनेछ । पारिवारिक सदस्य तथा संगी सम्बन्धीको साथ मनमुटावको सम्भावना छ । जमीन, वाहनको खरिदको दस्तावेजमा सावधानी अपनाउनु होला ।
रहश्यमयी विद्या र आध्यात्मिक विद्या प्रति विशेष आकर्षण रहनेछ । नयाँ कार्यको शुरुवातको लागी शुभ समय छ । मित्र तथा संगी सम्बन्धीको आगमनले घरमा प्रशन्नता रहनेछ । हातमा लिएका कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । प्रिय व्यक्तिको साथ भेटघाटको सम्भावना छ ।
वाणी र व्यवहारमा संयम राख्नु होला । परिवारजनको साथ मनमुटाव नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । शेयरमा पुँजी निवेशको आयोजन गर्नु हुनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या आउनेछ । आँखामा समस्या हुने सम्भावना छ । नकारात्मक वृत्ति टाढा राख्दा लाभ हुनेछ ।
शारीरिक र मानसिक रुपले तपाइँको दिन प्रफुल्लित रहनेछ । मित्र तथा पारिवारिक सदस्यको साथ घरमा उत्सवको वातावरण रहनेछ । सुरुचिपूर्ण र मिष्ठान्नको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ । घुमफिर या पर्यटनको आयोजन हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले लाभदायक दिन छ । अध्यात्म र चिन्तनमा गहिरो रुची रहनेछ ।
आर्थिक योजना र पुँजी निवेश गर्दा निकै ध्यान दिनु होला । एकाग्रता कम र बेचेनीको अनुभव हुनेछ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । मित्र तथा स्वजनको साथ मतभेद हुनेछ । लालच वृत्तिले तपाइँको नोक्शान हुनेछ । जमानतगीरी तथा कोर्टको मामलामा नपर्नु नै उचित हुनेछ ।
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार १० गते मंगलबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भदौ ६ , शुक्रबारको राशिफल !